အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ လစာတိုးပေးသင့်၊ မသင့် သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကောက်ခံစဉ်
အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို လစာတိုးပေးသင့် မသင့် ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မနေ့က စတင်ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူနေပါတယ်။ အခုလို အွန်လိုင်းကနေ မဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့ ပြည်သူလူထု သဘောထားကို ကောက်ခံတာ ပထမဆုံးဖြစ်တယ် လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး က ပြောပါတယ်။
"ကောက်တဲ့ဟာက ကျနော်တို့က အားလုံးပြည့်စုံပြီ လို့ ပြောလို့မရဘူး၊ ကျနော်တို့ စမ်းသပ်ပြီးကောက်ခံ တာပေါ့၊ နံပါတ် ၁ က ပြည်သူ့သဘောထား ကို ကောက်ခံတဲ့နေရာမှာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်၊ အိမ်တိုင်ယာရောက် စစ်တမ်းကောက်တာရှိတယ်၊ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ကောက်ကွက် သတ်မှတ်ပြီးတော့ ကောက်သင်းကောက်တာရှိ တယ်၊ နောက်တဆင့်က ပြည်သူ့သဘောထားတွေ ကို ဖော်ပြနေတဲ့ မီဒီယာတွေကနေ အသံတွေယူတာ ရှိတယ်၊ ဒီအွန်လိုင်းက အစိုးရဖက်က ပထမဆုံးစပြီးတော့ ကောက်တဲ့သဘောပေါ့နော်၊ ဒီဟာအပေါ်မှာ ကျနော်တို့က ပြည်သူလူထုရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့၊ ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ပါမလဲ၊ ဘယ်လောက် အထိပြန်ပြီးတော့ ဖြေကြားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့"
ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို လစာတိုးပေးဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မြင့်ဖေက တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကို လစာတိုးပေးဖို့ တွက်ချက်နေတယ်လို့ သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြေညာထားပါတယ်။ အဲဒီလို စစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို "မက်မောလောက်အောင်" လစာတိုးပေးဖို့ သင့် မသင့်၊ “အတင့်အသင့်” သာ တိုးပေးသင့်၊ မသင့် ဒါမှမဟုတ် အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းတွေ အသုံးစရိတ်ချွေတာပြီး အခြေခံဝန်ထမ်း တွေသာ လစာတိုးပေးသင့်ဆိုပြီး စစ်တမ်းကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ခွဲခြားကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ အနေန့ဲ သိန်း ၅၀ ဆိုတာ တကယ်တော့ နည်းပါတယ်။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတောင် ပင်စင် လစာ သိန်း ၁၀၀ လောက် ရနေတယ်လို့ ဦးရွှေမန်း ဆိုပါတယ် . သမ္မတရုံး အသုံးစရိတ်မှာလည်း မနည်းကြောင်း၊ စစ်ဆေးမည့်သူ မရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး “ပြောချင်ရာ ပြော ပြီးဘာမဆို အရမ်း လုပ်ချင်ရာလုပ် နေတာ တိုင်းပြည့်ဘဏ္ဍာတွေ နစ်နာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင် အာရှတွင် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းသို့ပင် ရောက်ရှိ နေ ပါတယ်
အနှစ် ၆ဝ ကျော် တိုင်းပြည် ကို စုပေါင်း ဖျက်ဆီးခဲ့ တာ အားရသေးပုံ မပေါ်ဘူး။
Jan 02, 2015 06:46 PM
၀န်ထမ်းလစာတိုးပေး မယ်ဆိုတာတော့ ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန် အထိ လစာဘယ်နှစ်ခါ တိုးပေးပြီးပြီလဲ။ နောက်ထပ် ကော ဘယ်နှစ်ကြိမ် တိုးပေးရအုံးမှာလဲ။ အဲဒီလို တိုးတိုးပေးနေရုံနဲ့ ပြဿ နာပြေလည်မသွားဘူးဆိုတာ တိုင်းပြည် မှာအဂတိလိုက်စားမှု လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကို မနှိမ်နင်းတဲ့အတွက် ဖြစ်နေတာ။
Jan 01, 2015 07:44 PM
လာဘ်မရနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုသာ လစာတိုးပေးသင့်ပါတယ်။ (လာဘ်စားနိုင်တဲ့သူတွေက အနည်းဆုံး သမ္မတခွင့်ပြုငွေ ၃သိန်း ရနေနိုင်လို့ပါ။)
Jan 01, 2015 07:22 PM
all employees from government services and private organizations should increase salary to match the inflation and lost of money buying power. the main problem is very difficult to control the all kind of rising cost to all kinds of products,produces and services.
government must have proper budget plan well ahead for next year.
the question is how can government pay the the increase expenses without plan?
Jan 01, 2015 01:22 PM